musha AFRICAN STARS Fikayo Tomori Kukura Kwemhuri Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Fikayo Tomori Kukura Kwemhuri Nhau Uye Untold Biography Chokwadi. Chikwereti kuPremiLeague
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Fik". Yedu Fikayo Tomori Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Fikayo Tomori Zvekuchechecheche Nyaya- Iyo Ongororo kusvika Huye. Chikwereti kuna IG
Ehe, munhu wese anomuona saiye akazara-asina kutombokanganisa uye maari Frank Lampard anofara kwazvo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Fikayo Tomori's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi,
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiOwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori. Tomori, sezvaanowanzo kudanwa, akaberekwa pazuva re19th raDecember 1997 muguta iri muCalgary, Canada. Pazasi pane mufananidzo wechidiki Fik naamai vake vakanaka paakange achiri mucheche. Sekureva kwemutendi weChelsea, pikicha iri zvakare yeNigeria.
Fikayo Tomori anotakura mwana wake anoitika kuva Fik. Chikwereti kuna IG
Fikayo Tomori akaberekwa semwana wekutanga uye iye ega mwanakomana kuvabereki vake vanodiwa Mr naAmai Oluwadamilola Tomori vane mhuri yavo vanobva Osogbo, Osun state, maodzanyemba akadziva kumadokero eNigeria. Asati aberekwa, vabereki vaTomori vakatanga vanogara kuLagos, Nigeria vasati vatamira kuCanada kwavakanogara iye. Vabereki vaviri vanoita sekunge vari mukupedzisira kwavo 40's senge panguva yekunyora.
Fikayo Tomori ari pikicha pamwe nevabereki vake.
Mhuri Yacho: Fikayo Tomori anokudzwa kubva kumhuri yepasi-yepamusoro mhuri, iyo hupfumi hwayo hwakasungirirwa kwete kunhabvu chete, asi kumhuri yake yakawandisa iyo mitezo yayo ine hutongi hwematongerwo enyika hwakasimba muSouthwest Nigeria. Waizviziva here? imwe nhengo yeTomori yakatambanudza imba nemazita; Otunba (Mai) Nyasha Titilayo Laoye-Tomori, MPA, BA, PGDE aimbova Mutevedzeri Gavhuna wedunhu reOsun, Nigeria.
Fikayo Tomori mupfumi Aunt- Otunba Nyasha Titi Laoye Tomori. Chikwereti kuOliveBranch
Kudzokera kuhupenyu hwake hwepakutanga !. Mushure mekugara makore manomwe muCanada, vabereki vaFikayo Tomori vakanzwa kukosha kwekubva kune mutsva tsika uye nekushanduka kwenzvimbo. Vabereki vake vakatama nemwanakomana wavo kubva kuCalgary kuenda kuLondon, United Kingdom.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Paaive muLondon mugore re2004, Fikayo Tomori akapinda chikoro chakamupa mukana wekutamba nhabvu inokwikwidza panguva dzemitambo. Izvi zvakaita kuti afarire kutora basa.
Iyo gore 2004 yakaona zvakare yakashandiswazve Chelsea FC inotonga nhabvu yeChirungu yekutenda Iye Anokosha uyo akafarira maAfrica saDidier Drogba. Wese nhengo yeimba yake akatsigira kirabhu uye Tomori pachake aive nehurongwa hwake. Akagadzira pfungwa dzake paakada kuve nhengo yeLondon Club's academy.
Kwaari, nzira inonyatsobudirira yekuongororwa kwekuedzwa kuChelsea FC Academy yaive yekubatana neChelsea Soccer School. Achiri ikoko, scouts dzakamusarudza pakati pevatambi vechidiki uye ivo vakokwa kune miedzo kuChelsea FC development Center.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Fikayo Tomori Akajoina Chelsea FC academy mugore 2001 semwana ane makore manomwe. Paakajoinha, akaendeswa kune iyo kirabhu pasi-8 level. Tomori akabudirira kufambisa nzira yake kuburikidza neyechidiki hwekugadzwa kweChelsea, achikwira masosi nekukurumidza zvikuru muhupenyu hwake hwese.
Waizviziva here? Fikayo Tomori pamakore ake ekutanga neChelsea academy akatanga kushamwaridzana nemumwe waanodzidza naye mutambi, Tammy Abraham uyo anga ari shamwari dzake dzepedyo. Pazasi pane mufananidzo wevaviri shamwari panguva yemakore avo ehuduku neChelsea FC academy.
Fikayo Tomori Kurarama Kwekutanga Hupenyu. Chikwereti kune bpi uye IG
Nguva inofamba sei!. Hushamwari hwavo hwakafambira mberi kusvika pazera ravo rekuyaruka sekuratidzwa kwehuwandu hwehembe yavo. Vese vari vaviri kutanga, vakabata zviroto zvavo zvekusvika pamusoro pebasa ravo, iri timu yepamusoro. Ushamwari hwavo hungafananidzwa newe Mason Mount uye Declan Rice.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Iro 2015 uye 2016 yakava shanduko mukuchinja kwevechidiki basa raTomori. Akabatsira timu yevechidiki veChelsea mukutemba kudzoka kumashure mukukunda mune mbiri yeEFA Youth League pamwe neFA Youth Cup. Kuratidza kuti aive akanaka sei, Tomori akahwina mumafainari ese uye akatumidzwa 2016 Chelsea FC academy player yegore.
Nyaya yekubudirira kwevechidiki yaTomori haina kuperera ipapo sezvo budiriro yakaenderera. Mu2017, Akabatsira timu yake yeEngland U20 kuhwina FIFA U-20 World Cup kekutanga munhoroondo yavo mune chiitiko chakaitika muSouth Korea.
Fikayo Tomori Road KuFame Nhau
Zvekare, kumwe kubudirira kwevechidiki kwakatevera gore rakatevera 2018. Panguva ino, akabatsira wake England U21 kudivi kukunda Toulon Tonamendi. Kunyangwe zvese izvi zvavakawana, ivo vaive vachiri kutya mupfungwa dzaTomori. Zvino ngatitaurei chikonzero nei.
Nei Uchitya ?: Zvakanyorwa zvakanaka kuti Chelsea FC inofarira chikwereti-system kune wake akapedza kudzidza, uye vanozeza kutamba navo muchikwata chekutanga. Ichi chikonzero nei kutya kubata pfungwa dzese nyeredzi dzedzidzo panguva yavanotarisirwa kuibva kuchikwata chekutanga.
Semunhu akapedza kudzidza chikoro chemitambo, kutya kwaTomori kwakauya kuzomuvhima. Iye pamwe neshamwari yake yepamoyo Tammy Abraham haana kuwana yakakwana nguva yemutambo. Vakaendeswa kune mamwe makirabhu kuti vagowana ruzivo. Tomori akazova nhengo nyowani yeChelsea FC chikwereti mauto kunyangwe ari iye akanakisa mune yake yekudzidza makore.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Mukuedza kuwana nguva yemitambo uye ruzivo, Tomori akawana paLoan ka Frank Lampard uyo panguva iyoyo aive pachinangwa chekubira Chelsea chikwereti mauto mushure mekugadzwa kwake semukuru weDerby County. Lampard yakawana Tomori pane chikwereti pachivimbo.
Fikayo Tomori akazowana mukana wekubudirira kupinda muchikwata cheDerby County chekutanga. Akarova pasi achimhanya achangosvika kuPride Park, achivabatsira kusvika pamutambo wekupedzisira weChikwata cheChikwata.
Waizviziva here? Nguva yakanakisa yaTomori haina kuenda isingazivikanwe. Akatumidzwa zita Mutambi weDerby weGore pakupera kwemwaka wake wekutanga nekirabhu. Izvi zvakamuwanisa rekodhi rekirabhu yekuva mutambi wechikwereti wekutanga kuhwina mubairo uyu. Akazviita izvi achitungamirirwa neChelsea FC Legend, Frank Lampard.
Fikayo Tomori naFrank Lampard panguva yavo yeDerby Voyage. Chikwereti kuna IG
Ukama huripo Lampard uye Tomori haana kumira ipapo. Vese mutambi nemaneja vakasangana zvakare kuStamford Bridge mushure menguva yavo kuDerby. Izvi zvakaitika mushure mekunge Lampard yatsiviwa Sarri yebasa reChelsea.
Kutonga kubva ku2019 / 2020 mwaka, zviri pachena kuti Lampard inobata Tomori zvikuru. Ingori nyaya yenguva chete Tomori asati ave fan yacho uye maneja anosarudzika pakati kumashure sarudzo yeLondon klabhu. Kurota kwake kwakaputswa iko zvino kwatanga kuzadzikiswa uye mamwe, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira, zvine chokwadi chekuti vateveri veChelsea vazhinji vangadai vakabvunza kuti musikana waFikayo Tomori angave ani. Ehe! hapana kuramba chinhu chekuti kutaridzika kwake kwakasviba pamwe chete nemhando yekutamba kwake kwaisazomuita muzambiringa unodakadza kuvanhukadzi.
Vateveri veChelsea vabvunza munguva pfupi yapfuura… .Ndiani Fikayo Tomori's Girlfriend? Chikwereti kuna IG
Kubva paruzivo rwunowanikwa paTomori social media inobata, zvinoita kunge aifarira kutarisa nezvebasa rake (sepane nguva yekunyora). Chokwadi ichi chinoita kuti zvitiomere kuunganidza chero info nezve hukama hwake hwehupenyu kana nhoroondo yekufambidzana.
zvakare, Fikayo Tomori anoziva kuti vateveri veChelsea uye mamaneja vanogona kuregererwa zvakanyanya kune vechidiki vari kuuya vasingafarire, chimwe chezvikonzero nei iyo kirabhu ine battalion yevatambi vechikwereti. Nekudaro, zvakare zvinoita kuti Tomori ave nemusikana asi arambe kuita hukama hwake naye paruzhinji. zvirinani ikozvino.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Fikayo Tomori Somunhu Hupenyu kure nebasa rake rebhora raizokubatsira kuti uone zviri nani uye uzere maonero ehunhu hwake.
Kutanga kuenda, Fikayo Tomori mumwe munhu asiri kure nemabasa ebasa, anoedza kupedza nguva ari ega uye asinga zvese mukutsvaga chokwadi kwehupenyu. Tomori anokwanisa kushandura pfungwa dzake kuita kongiri kuita, imwe yaanoisa padanho rekutamba.
Fikayo Tomori Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi. Chikwereti kuna IG
Kubva pane fungidziro yekuona, Tomori panguva isiri yebasa nguva anoda kufambidzana nenyika mukuda kuti uzvione zvakanyanya sezvazvinogona.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Kana zvasvika kumhuri, Fikayo Tomori akazvitsaurira uye anoda kuita chero chinhu chipi zvacho sevanhu zvinobvira kuti vafadze baba vake, mai uye akanaka kwazvo mwana wehanzvadzi. Yake yepadyo sekucherechedzwa pazasi mhuri inorarama hupenyu hunonakidza muLondon nekuda kwekubudirira kwavo.
Tomori anoenda nemhuri yake yepedyo. Chikwereti kuna IG
Nhengo dzese dzemhuri dzinodada nekirasi yavo yekutanga Nigerian midzi uye havatombonyari kuratidza iyo. Izvi zvinoonekwa sevese baba, mum uye hanzvadzi yemwana vese vari kuda kuti Fik atambere timu yenyika yeNigerian. Nepo Fikayo Tomori mum uye mwana wevacheche achirarama hupenyu hwakaderera key, baba vake vanopinda zvakananga mukuita basa remwanakomana wavo.
Mufaro wekuona Mwanakomana wake: Waizviziva here? Ndichiri kuDerby County, Tomori akabatsira timu yake kuhwina Manchester United mukubvisa zvinoshamisa kubva kuCarabao Cup kuburikidza nemauto ekupfura. Hapana ainyanya kufara kupfuura baba vake vakasvetukira kumusoro uye pasi nemufaro nekutenda nekukunda kwemwanakomana wavo. Ona vhidhiyo pazasi.
Tomori mushure memutambo akaisa vhidhiyo iyi pasocial media yababa vake vachisvetuka nekutamba vakatarisana neimwe imba yekutandarira yemhuri.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Tomori sep panguva yekunyora vane musika Kukosha kwe7 mapaundi emari izvo zvinorehwa kuti zviwedzere. Kukosheswa zvakanyanya izvi hakuendese nenzira yekushandura hupenyu hwakajeka, hwunotaridzika nyore nevashoma emota dzinoshamisa, dzimba uye dhayeti inorema.
Fikayo Tomori HupenyuStyle Chokwadi
Kuna Tomori, pane nguva dzose mari yakakwana kurarama hupenyu hwakajairika. Zvekare, kukuzivisa iwe, kubudirira kwake mune zvemari hakuna kusungirirwa zvakananga kune ake maitiro seanomhanya bhora kutonga kuti anouya kubva kumhuri yakapfuma.
Fikayo Tomori Mwana Wevadiki Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
1997, Year Tomori akazvarwa akaburitswa kuburitswa kweDrama / Disaster firimu rakanzi "Titanic" iyo ichiri imwe yenyaya dzinonakidza munhoroondo.
1997 raive gore raive Titanic yakaburitswa.
Gore iro 1997 yakaratidzawo kufa kwemuchinda wevanhu vakashumirwa nenyika nezve "Dynasty Di". Late Princess Diana akafananidzirwa pazasi akaurayiwa muParis, mutsaona yemotokari iri kuteverwa nepartazzi.
Princess Diana Akafa mugore re1997. Chikwereti kuDaily Express
Kukudzwa uye mibairo: Tomori ndomumwe wevadiki vechidiki venhabvu avo vakambokwenenzvera munenge timu yega yega yaaimbotamba nayo, achiunganidza zvibodzwa zvakati wandei uye kukudzwa kweumwe neumwe kunoonekwa pazasi panguva yekunyora.
Fikayo Tomori Rekodhi uye Honours muchidimbu. Kiredhiti Zuva
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Fikayo Tomori Nyaya yeChikoro chevana uyezve neS Untold Biography Facts. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.